HEEGAN VS BANAADIR SC Kulan waxbadan ka beddeli kara kaalimaha 2-aad iyo Seddaxaad ee Horyaalka | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - HEEGAN VS BANAADIR SC Kulan waxbadan ka beddeli kara kaalimaha 2-aad iyo Seddaxaad ee Horyaalka
HEEGAN VS BANAADIR SC Kulan waxbadan ka beddeli kara kaalimaha 2-aad iyo Seddaxaad ee Horyaalka
Kooxaha Banaadir SC iyo Heegan ayaa galabta kulan xiiso badan ku wada qaadan doona, Garoonka Koonis ee Degmada Cabdi-casiis, iyadoo ciyaartoodu ay waxbadan ka beddeli doonto, hoggaanka Kaalinta labaad iyo Seddaxaad ee kala Sarreynta Somalia Premier league.
Banaadir SC haddii ay adkaato kulankan, waxay si KMG ah ula wareegi doontaa kaalinta Labaad ee horyaalka, iyadoo booskaas kasoo ridan doonta naadiga Horseed ee hadda ku fadhisa oo dhibac qurana u jirta kooxdan.
In heegan badiso xataa waxay halis ku tahay booska ay hadda Horseed joogto maaddaama ay labada kooxood u dhexeeyaan 2 dhibcood, waxayna labadan kooxoodba u dagaallamayaan kaalinta 2-aad, iyadoo middii laga badiyo ay xataa ka bixi doonto kaalinta 3-aad una dhaceyso Afaraad.
Toddobaadkii hore, Heegan waxay guul soo Kabasho ah ka gaartay naadiga Elman, markaas oo ay ku badisay 2-1, halka Banaadir SC ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee Khasaare u horseedda kooxda Horseed, markii ay isku qabteen kulanka koobaad ee wareegga labaad ee labada naadi.
Kulanka Galabta natiijadii kasoo baxda, kala soco Ciyaaro.com